हाम्रो बारेमा - अरेक्स औद्योगिक टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड।
अरेक्स औद्योगिक टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
अरेक्स औद्योगिक टेक्नोलोजी कम्पनी १ 1995 1995 on मा फेला परेको थियो, यो एक प्रमुख स्वतन्त्र औद्योगिक आपूर्तिकर्ताको रूपमा। हामी उच्च प्रदर्शन आपूर्तिकर्ता सम्बन्ध प्रदान गर्न चीन भरि फर्महरु संग साझेदारी छ। के अरूलाई सफल हुन मद्दतको दृष्टि र उद्योग समर्थन गर्ने जुनसुकै कुराको साथ सानो मेसिन मर्मत व्यवसायको रूपमा शुरू भयो, विस्तारित गर्न र नयाँ, उत्तम र बिभिन्न तरिकामा सेवाको लागि समर्पित टीमको साथ बढेको छ। विशेष गरी, अरेक्सले बेइटेन रबर र प्लास्टिक कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चल्दछ र विश्व मार्केटिंगमा यो अनौंठो विन्डोको रूपमा। चीनमा रबर र प्लास्टिक उत्पादनहरूको manufacturer० बर्ष भन्दा बढी देशी उत्पादकको रूपमा बेइटेन, जुन खननको लागि प्रतिरोधी उत्पादनहरू आपूर्तिमा विशेषज्ञता प्राप्त गर्दछ। दुबै कम्पनीहरु एक बोर्ड को निर्देशक सम्बन्धित छ। सबै स्रोतहरू एक अर्कासँग साझा छन्। (बेइटेन: www.baytain.com बारे थप जानकारी प्राप्त गर्न)
अरेक्स एक निर्माता, व्यापारी, कपडा, मशिनिस्ट, औद्योगिक सामग्री, उपकरण र अन्य औद्योगिक आवश्यकताहरू र आवश्यकताहरूको आयातकर्ता र वितरक हो। हामीसँग अन्य प्रीमियम निर्माताहरूसँग राम्रो साझेदारीको फाइदा छ जुन लामो अवधिमा चीनमा विभिन्न व्यापार क्षेत्रका साथ सेवा गर्दछ। यो केवल उपरोक्त आवश्यकताहरु प्रदान गर्न को लागी प्रमाणित भएको छ तर यसले अन्य आवश्यकताहरु पनि पुर्‍याउन सक्छ जुन सम्बन्धित खनन र मेकानिकल व्यवसायसँग सम्बन्धित छ। हामीसँग हाम्रो ग्राहक र उद्योग आवश्यकताहरू र चुनौतीहरूको गहन समझ छ। हामी सधैं अग्रसरतापूर्वक समस्याहरू समाधान गर्दै र जटिलताहरू हटाएर अगाडि सोच्दछौं र हाम्रा ग्राहकहरूलाई कहिल्यै श doubt्कामा नपार्ने लक्ष्य राख्छौं। विश्वका अग्रणी ब्रान्डका साथ उद्योग पेशेवरहरूलाई जोड्दै, हामी स्रोत र उद्योग र खनन समाधानको उद्देश्यका लागि रबर, प्लास्टिक र धातु उत्पादहरूको एक विस्तृत श्रृंखलाको आपूर्ति गर्छौं। हाम्रो प्राविधिक अनुप्रयोग सल्लाह र पूर्ण सूची व्यवस्थापन समाधान मार्फत हामीले खनन कम्पनी र सम्बन्धित उद्योगका लागि विश्वव्यापी धेरै व्यवसायहरूको विश्वास र समर्थन प्राप्त गरेका छौं।
एक्सचेन्ज र सहकार्य
आरेक्सले व्यक्तिगत व्यावासायिक आवश्यकताहरूको अनुरुप व्यक्तिगत समाधानहरूको निर्माण र प्रस्ताव गर्न समय खर्च गरेर जीवनभर साझेदारी सिर्जना गर्दछ। फ्रिइभिंग, स्वस्थ र दिगो समुदायहरूको निर्माणको लागि हाम्रा ग्राहकहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्दैछौं।
हामी आफैलाई अर्को आपूर्तिकर्ता मान्दैनौं किनकि त्यो केवल हामीले मूर्ति बनाएको मात्र होइन; हामी व्यापार साझेदार हौं, यात्रा सुधार गर्न प्रतिबद्ध। मित्रता बनाइन्छ, र सम्बन्धहरू निर्माण हुन्छन् - सँगै काम गर्नुहोस्, सँगै जित्नुहोस् र सँगै मनाउनुहोस्।
विकासको प्रक्रियामा, अरेक्सले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विभागहरू र अनुसन्धान संस्थानहरूको साथ आदानप्रदान र सहयोग गरे। यसले हामीलाई हाम्रो डिजाइन, उत्पादन, मर्मत, कमीशन र ईन्जिनियरिंग नविकरण क्षमताहरू सुधार गर्न मद्दत गर्‍यो। रबर उत्पादनहरु र पॉलीयुरेथेन उत्पादनहरुको लागी संसारको पहिलो ग्रेड कम्पनी को लागी arex लाई प्रबर्धन गर्ने, जुन खानीको क्षेत्र मा सबै ब्राण्डको तयारी मेसिनको लागि उपयुक्त छ।
आरेक्स उद्योग पहिरन प्रतिरोधात्मक र संक्षारण प्रतिरोधी समाधान, कम्पोनेन्ट्स र खनन तयारी उपकरणसँग सम्बन्धितको डिजाइन, निर्माण र आपूर्तिमा उत्कृष्टता प्राप्त गर्नमा केन्द्रित छ। हामी कडा खनन र औद्योगिक अनुप्रयोगहरूको लागि अनुकूलन रबर समाधानहरू र पॉलीयुरेथेनन समाधानहरू प्रदान गर्दछौं जसले एक नवीन दृष्टिकोणको आवश्यक पर्दछ। हामी विश्वस्त छौं कि हाम्रा उत्पादनहरूका गुणवत्ता र प्रतिस्पर्धी मूल्यले हाम्रा ग्राहकहरूलाई सकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्नेछ। हाम्रो उद्देश्य खनन र औद्योगिक अनुप्रयोग समाधानहरूको लागि तपाईंको सर्वश्रेष्ठ निर्माता बन्नु हो।
अरेक्सको दृष्टिकोण विश्वस्त स्रोत, कस्टम रबर समाधानहरू र विश्वमा कच्चा खनन र उद्योगको क्षेत्रमा पॉलीयुरेथेन समाधानहरूमा विशेषज्ञता प्राप्त गर्न सकिन्छ।
हामीलाई उपभोग्य स्टकको तनाव र समस्या हटाउन दिनुहोस्। हाम्रो नवीन प्रक्रियाहरू क्रमबद्ध र स्टक ट्र्याक सरल राख्छ।
पूर्ण पारदर्शितासँग जोडिएर बस्नुहोस्, हामी उत्कट छौं कि कडा संचारले सफल सम्बन्धको लागि बनाउँदछ।
हामी जान्दछौं हाम्रो ग्राहकहरुलाई उत्तर चाँडो नै आवश्यक छ, हामी चुस्त छौं र हाम्रो प्रतिक्रियामा सक्रिय छौं।
किन सीमित हुन? हामी तपाईंलाई सँधै के चाहिएको हो सोर्सिंगमा समय लगानी गर्दछौं।
हामीलाई मद्दत गरौं! हामी आफैंलाई उद्योग विशेषज्ञहरु संग हात मा गर्व को लागी हर पल सही समाधान खोज्न।